Somalia - MSF waxay hakad gelisay howlgaladeedii deegaanka Madiina muqdisho ka dib markii weerar toos ah lagu qaaday xafiiskeeda - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ka dib ku dhowaad laba (2) bilood ee ay howl-gal caafimaad ka wadey Degmada Madiina, Hayada gargaarka caafimaad ee Dhakhaatiirta aan Xuduuda Lahayn (MSF) waxaa soo wajahay dhibaatooyin ah in labo weerar bam-gacmeed oo isku xig-xiga lagu qaaday Xafiiskeeda Muqdisho ee ku yaal degmada Wadajir in ka yar hal usbuuc gudohood.,. Weerarka labaad waxaa dhaawac fudud kasoo gaarey labo waardiye oo ku sugnaa goobtaas. ‘’MSF waxay dhacdadaas u aragtaa mid aad u daran maadaama la bartil-maameed saday dhismaha MSF, kaas oo loogu talagalay in waxyeelo culus ee naf iyo maal loogu geysto MSF. ‘’Falkaas awgiis, dhammaan howlihii caafimaad hakad ayaa la geliyey mudo aan cayinayn’’ ayuu yiri Joachim Delville, Madaxa Mashaariicda MSF
MSF waxay mar kale dib u xaqiijineysa sida ay uga go’an tahay caawinta bukaanka somaaliyeed iyo dadweynaha maxaliga ah, hase ahaatee, waxay ku adkaysanaysaa in aan howl-galada caafimaadku sii soconeyn haddii waxyeelo ka soo gaareyso MSF, siiba hadii waxyeelo amni soo gaareyso shaqaalaha iyo bukaanada MSF. ‘’Falalkaan kadib, waxaan rabnaa inaan dib wada-hadal ula bilowno maamulada iyo dadka deegaanka si aan dib ugu qiimeyno una helno ka faala qaad buuxa ee ku aadan xaga amniga oo la aqbali karo’’ ayuu carabka ku dhuftay Delville, ‘’MSF waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada Soomaaliya in ay tixgeliyaan nolosha dadka rayidka ah ayna hubiyaan in shaqaalaha gargaarku si nabad-galya ah u gaari karaan dadka baahan’’.
Waxaan walac gaar ka qabnaa xaalada bukaanka kuwaas oo aan ka heli karin daryeel caafimaad ee bilaash ah, deegaanka ay ku sugan yihiin, gaar ahaan, dhalaanka nafaqa daridu hayso. ‘’Waqti xaadir kaan, waxaa noo diiwaan-gashan 414 caruur ah oo ka faa-iidayey barnaamijka nafaqaynta, kuwaas oo 59 (14%) ka mid ah ay la il-daran yihiin nafaqa daro xun, isla markaasna ay soo wajahayso khatar in ay ka sii daraan haddii uusan jirin daryeel nafaqo ee ku haboon.’’, ayuu yiri Delville. Qorshe waxaa kaloo noo degsanaa inaan goob labaad ee caafimaad ka furno degmada Wadajir taas oo lagu daryeeli doono, laguna daweyn doono caruurta nafaqa daridu hayso, qorshahaas nah hakad ayuu gelayaa sidoo kale.
MSF waxay dhawaan xarun caafimaad ka furtay degmada dharkeynley (Muqhdisho), Xaruntaas caafimaadka ayaa adeeg caafimaad u fidineysey dhammaan qoysaska, dadka deegaanka iyo weliba kuwa ku soo barakacay. Labadii bilood ee ugu horeysey ee shaqada, MSF waxay daweysey 3217 caruur ah, 60% (1932) ka mid ah caruurtaas ayaa da’doodu ka yar tahay 5 sano, kuwaas oo 856 ka mid ahna lagu qaabilay barnaamijka nafaqeynta.
Dakhaatiirta Aan Xudduudka Lahayn MSF waxay Soomaaliya si aan kala go’ lahayn uga shaqayneysey laga soo bilaabo 1991, haddana waxay Daryeel caafimaad oo bilaash ka bixisaa sideed (8) gobol oo ku yaal Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ka badan 1,300 oo Shaqaale Soomaali ah kuwaas oo ay taageerayaan 100 shaqaale Nairobi jooga, ayaa bixiya Daryeel Caafimaad oo assaasi ah, Daweyn nafaqo, Daryeel iyo daweyn dadka barakacay, Qaliin, Biyo iyo Cunto qaybin. MSF dawladaha kama aqbasho in ay maalgeliyaan Mashaariicda ay ka wado Soomaaliya, dhammaan maalgelinta Mashaariicda Soomaaliya waxaa bixiya shaqsiyaad gaar ah (Tabarucaad dadweyne).
Tags: Hakad, Medina, Muqdisho